Soso-kevitra lehibe ho nandimby Freelancer toy ny Internet
Markets for Mahantra
Marketing Olana & Fomba Out
Posted by: Bhose Septambra 10, 2013
About 75% ny olona miasa sy mitady vola ny asa an-tserasera tahaka ny tsy miankina freelancers, ary ao an-trano na amin'ny alalan'ny telecommute na hahazo asa mandray karama amin'ny alalan'ny orinasa an-tserasera ny sasany, ary mbola miasa araka ny teny sy ny fahaiza-manao. Ny aterineto dia nanao izay tena afaka entana ny asa mba ho outsourced ho mora mpiasa any amin'ny firenena hafa, ary ny azy ireo mba ho aloa amin'ny alalan'ny fanodinana ny safidy fandoavam-bola an-tserasera. Maro ireo orinasa any Etazonia dia nanapaka teo amin'ny overheads amin'ny OUTSOURCING ankamaroan'ny asany ny mpiasa any India sy ireo firenena hafa, ary hahazo ny aloavy amin'ny alalan'ny PayPal na rafitra fandoavam-bola aterineto hafa. Maro ny vehivavy any Etazonia koa lasa haingana ny asa-at-trano sy ny maro mums orinasa an-tserasera no miakatra izay miasa lasibatra-at-tokantrano sy ny mpianatra ary ny mums freelancers hafa. Ianao noho izany ny freelancer raha miasa ho be na ho kely araka izay maniry sy mivantana avy ao an-tranonao ny aterineto amin'ny alalan'ny-mifandray solosaina, ary koa amin'ny alalan'ny aterineto nahazo karama fomba fandoavam-bola processor. Inona ary ireo lafin-javatra lehibe sasany mba mandray anjara ny fahombiazana toy ny asa an-trano-at-freelancer?
aho. Alatsaho ny vokatra ny ora: Tsy maintsy mahatakatra fa rehefa miasa avy amin'ny fampiononana ao an-tokantranonao, dia mety ho fahendrena ny mametraka ora mamokatra rehefa tsy ho sosotra ny mpitsidika na ho nentina tamin'ny frivolities sy ny TV. Tsy maintsy hametraka mamokatra sasany ankoatra ny ora izay tsy maintsy hiatrika ny asa toy ny hoe tao amin'ny birao ara-dalàna, ary mety hilaza ny mpitsidika tsy mba hitsidika amin'ny ora izany satria tonga mba hahazoana ny mandrakariva.
II. Ny asa ao amin'ny tontolo sahaza: Toy ny asa an-trano-at-freelancer, ny asa soratra mety ho lahatsoratra, VA, antso foibe, transcriptionist sy ny mpitaiza an-tserasera eo ny hafa. Mila tontolo iray izay sahaza ny zanakao tsy ho nuisance sy izay afaka hifantoka amin'ny asa tsy misy sisiny ho diso. Sary an-tsaina ho toy virtoaly telecommuting antso mpanampy na foibe sy ny mpanjifa hafa amin'ny faran'ny andalana hihaino ny zanakao ny fitomaniana sy ny TV blaring, na dia ny feon'ny motorcars. Tadidio fa maro ny asa-at-trano freelancers mahazo maro mihoatra noho ny karama isam-bolana earners.
III. Aza hanaikitra mihoatra noho izay azonao mitsako: Azo atao ny be loatra amin'ny asa ianao raha tsy mikarakara momba ny boky avy amin'ny asa ianao maka amin'ny. Afaka manafotra ny tenanao sy ny asa toetra voa afaka ny adin-tsaina rehefa manomboka maka ny fiantraikany eo aminao. Sary an-tsaina ny fitsipi-pitenenana manana typographical sy ny fahadisoana eo amin'ny tranonkala ny votoatin'ny asa soratra satria ny atidoha dia fanakatonana avy teo ambonin'ny-asa. Asa na dia an-tserasera mety ho avy amin'ny avo lulls sy ny fitakiana, tsy maintsy manaiky ihany ianao asa antoka ny nahavitany tsy mamela ny toetra mijaly, ary raha ny marina dia mety hihevitra ianao OUTSOURCING rehefa revo amin'ny an tamin'ny asa be loatra, ary nahazo ny hihaona fe-potoana farany.
IV. Foana tamin'ny fanaovana kaonty tsara kaonty: Raha toa ianao ka monina ao amin'ny United States, aza adino fa tsy maintsy mandoa hetra ho amin'ny IRS raha mahazo mihoatra noho ny $600 toy ny freelancer na inona na inona omena taona, ary mety koa mila mameno madinika sasany overheads ianao na dia miasa any an-trano. Mitandrina tsara ny vola miditra tantara, loharanom-baovao an-tserasera asa, asa fe-potoana farany, ary ny zava-dehibe hafa vakizoro mahakasika ny asa dia mametraka anareo ho toerana izay afaka hamaritra ny toerana ara-bola avy amin'ny topy maso fotsiny avy amin'ny boky.
V. Loharanom-baovao an-tserasera maro vola miditra: Rehefa miasa ho toy ny freelancer an-tserasera, matetika ianao tsy nahafeno fepetra ho fiarovana tombontsoa ara-dalàna accruable ny mpiasan'ny orinasa. Ianareo tsy nahafeno fepetra ho mpitsabo fiantohana, 401K soa, sy ny asa hafa ankoatry ny zavatra hafa tombontsoa; Koa dia tsy maintsy azo antoka fa hahazo ny maro loharanom-tserasera mba fidiram-bola raha misy mpanjifa na ny loharanom dries tampoka ny, afaka mahazo miaraka amin'ny hafa ka tsy fijaliana niharam-boina raha mbola misy famonjena ho an'ny rahampitso.
Aoka ianao ho voalohany haneho hevitra amin'ny "Soso-kevitra lehibe ho nandimby Freelancer toy ny Internet"
Leave a comment Cancel valin-
Ny adiresy mailaka dia tsy ho namoaka.
9 Dropshipping Business Name Fahadisoana mba Aza amin'ny Cost Rehetra
Drafitra Fampidirana Inona no atao hoe Dropshipping? Ahoana no Dropshipping Works LAHARAM-PAHAMEHANA, Ny Dropshipping Business Name Nahoana no zava-dehibe ny Get…
Alefaso Pulse: Ahoana no Get ny Mailing List mpanjifa mba hanao zavatra ny Frequent Newsletters
Febroary 11, 2018
6 Low-Business Investment Hevitra afaka manomboka ankehitriny
Novambra 19, 2017
Fantaro ny fomba iray Video Afaka Manampy Anao Mijoroa ao an-Industry
Jolay 29, 2017
PowerPoint tsara indrindra ho an'ny orinasa sy Templates Inona no mba hitady In One